ओली आफैले गरेको सम्झौंतामा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दा बेहोस .. – ToplineKhabar
ओली आफैले गरेको सम्झौंतामा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दा बेहोस ..
September 10, 2016 September 18, 2016 प्रदीप भट्ट0Comment
धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण सकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नेपाल र भारतका बीच व्यापार, विकास, आपसी सहयोगलगायतका विषयमा भएको सम्झौतामध्ये एउटा बुँदालाई लिएर ओलीमण्डलीले आलोचना गरेका छन् । यो आलोचना विप्लव माओवादीले समेत गरेका छन् । यो आलोचनाको विषय भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्यका रुपमा सहयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।
तर तथ्यहरुले के भन्छन् भने भारतलाई सुरक्षा परिषदमा सहयोग गर्ने निर्णय प्रचण्डको थिएन । यो निर्णय तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे र भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजका बीच भएको सम्झौता हो । यो ओलीकै आदेशमा या उनको समर्थन एमालेका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री बनेका महेन्द्र पाण्डेले गरेको सम्झौता हो । महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला २६ जुलाई २०१४ मा भारत र नेपालका बीच २६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा नेपालले भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न समर्थन र सहयोग गर्ने भन्ने लेखिएको छ । अहिले प्रचण्डसँग भएको सहमति पनि त्यही बुँदाको कपी पेष्ट मात्रै हो भन्ने कुरा ओलीले किन बुझ पचाएका छन् ।
सुस्मा स्वराज र महेन्द्र ब पाण्डे विच सन २०१४ मा जारी वक्तव्यको बुदा नम्बर ६ ।
6. Both foreign ministers shared that both countries hold similar views on major international issues affecting the developing countries and work in close coordination with each other in the United Nations and other international fora. The Nepalese side reiterated its support for India’s candidature for permanent membership of the UN Security Council.
प्रचण्डले यसअघि नै भनेका थिए– यो भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता हुँदैनन् बरु यसअघिकै सम्झौताको कार्यान्वयनको निरन्तरताका लागि पहल हुने छ । त्यही भएको छ । यसअघि जे जे सम्झौता भएका थिए, प्रचण्डले त्यही कुरामा जोड दिएका छन् । प्रचण्ड र मोदीबीच भएका सम्झौता यिनै पुराना सहमतिको निरन्तरतामात्रै थियो ।
ओली एमालेका अध्यक्ष हुन, एउटा लामो राजनैतिक विरासत भएका योद्दा हुन, नेपालको प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन । उनले यति तल्लो स्तरमा छूद्र टिप्पणी गर्नु उनको छटपटी हो भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दछ ।
तर यो कुरालाई पुरै नजरअन्दाज गरेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिकरुपमा अत्यन्तै तल्लो तहको व्यवहार प्रस्तुत गदैए टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि उनले प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कटाक्ष गर्दै सिंगडा खान गएको ? भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । ओली एमालेका अध्यक्ष हुन, एउटा लामो राजनैतिक विरासत भएका योद्दा हुन, नेपालको प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन । उनले यति तल्लो स्तरमा छूद्र टिप्पणी गर्नु उनको छटपटी हो भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दछ ।
प्रचण्डको भ्रमण अहिलेका लागि भारत र नेपालका बीच लामो समयदेखि व्याप्त रहेको तिक्तता र कटुसम्बन्ध हटाउने दिशामा केन्द्रीत थियो । भारत नेपालको छिमेकी हो । भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता हो । तर भारतसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राखेर नेपालको हित हुन् सक्दैन । यो यथार्थ हो । सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै दृष्टिले नेपालका लागि भारत परिपूरक हो, भारतका लागि नेपाल परिपूरक हो । विश्वका कुनै पनि मुलुकबीच नेपाल र भारतबीचको जस्तो विशिष्ट सम्बन्ध छैन । होइन, भने आम जनमानसमा बलिउडको प्रभाव हेरे पुग्छ । तर यो सम्बन्ध नागरिकस्तरमा जति सम्मानित छ, राजनीतिक तहमा यो विभेदीकृत रहँदै आएको छ ।
भारतीय नेतृत्वका लागि नेपाल जहिल्यै पनि उनीहरुभन्दा सानो, अपहेलित छ । यो सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दै सन्तुलित र समान प्रकृतिको सम्बन्धको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । न कि सम्बन्ध नै विच्छेद गर्ने ।
अहिले प्रचण्डको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा आएको यो दूरीलाई हटाउनु थियो । अहिले कुनै नयाँ सम्झौता या बागर््निंग गर्ने अवस्थामा न नेपाल छ, न त भारत नै । भारतका लागि समेत नेपालसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नु छ, नेपालका लागि पनि त्यही सत्य हो । त्यसैले प्रचण्डले अत्यन्तै परिपक्व कुटनीतिको परिचय दिँदै भारतको भ्रमण सफल पारे । उनले हिजोको विद्रोही नेताको कुनै पनि व्यवहार देखाएनन् । बरु छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धका लागि पहल गरे । एभरेष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रचण्डको यो सफलता देखेर चिढिएका ओलीले केही नपाएर भारतलाई सुरक्षा परिषदमा समर्थन गर्न सहयोग गरेको भन्ने कुरालाई आधार बनाएर टिप्पणी गरे । मानौं कि, नेपालको राष्ट्रियताको ठेक्का उनले लिएका छन् । के उनले हिजो आफूले गरेको सम्झौता बिर्सिए ? महेन्द्र पाण्डेले सुष्मा स्वराजसँग मिलेर गरेको सम्झौता के थियो ? के त्यो आम नागरिकलाई सुसुचित गरिएको थियो ? के ओलीले भारत भ्रमण पूर्व र पछि के भएको हो भन्ने कुरा प्रचण्डजस्तै सबैलाई साटासाट गरे ? ओलीले त्यो गरेनन् । बरु ढोंग गरे, ढोंग । उनले बाहिर एउटा कुरा गरे, भित्र अर्को कुरा गरे । यो तथ्यले पुष्टि गरेका छन् । आरोप होइन ।
एमालेभित्र प्रचण्डसँग असहिष्णु समूहले कम्तीमा गैर राजनीतिक तहमा यो स्तरको हल्ला नगरे हुने हो । राजनीतिक तर्क र तथ्यले चल्छ, कोरा भ्रमले होइन । यो कुरा ओलीले बुझ्नु जरुरी छ । उनी राजनीतिको उत्तरार्धमा छन् । आफूलाई सम्मानित स्थानमा राख्ने कि छूद्रताको सीमामा पुर्याउने, यो उनले बुझ्ने कुरा हो । कम्तीमा एमालेभित्रका इमान्दारहरुले ओलीको यो छूद्रता बेलैमा बुझे राम्रो ।
← कबिता – म आवाज हुँ ।
लघु कथा – मेरो यात्रा →
एसपीको निवासमा २ दिन ‘गैरन्यायिक थुना’ !
October 2, 2017 प्रदीप भट्ट 0